အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ COVID-19 Sinovac ကာကွယ်ဆေးများ ထပ်မံရောက်ရှိ - Xinhua News Agency
ဂျကာတာ ၊ မေ ၂၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Soekarno Hatta လေဆိပ်သို့ မေ ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံ Sinovac ဆေးဝါးကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်သည့် ပမာဏများပြားသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး နောက်ထပ်အသုတ် တစ်သုတ် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။“ဒီနေ့ COVID-19 Sinovac ကာကွယ်ဆေး ၈ သန်း ရောက်ရှိလာတာကို ကျွန်တော်တို့ မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။”ဟု စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးဝန်ကြီး Airlangga Hartarto က ပြောကြားခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ယခုထိ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး စုစုပေါင်း ၈၃ ဒသမ ၉ သန်းအား လက်ခံရရှိထားပြီး ဆေးပမာဏ အမြောက်အများ နှင့် အသင့်ထိုးနှံရအတွက်ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် Sinovac ကာကွယ်ဆေးများအပြင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ AstraZeneca ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်သည့် ကာကွယ်ဆေးများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Sinopharm က ထုတ်လုပ်သည့် ကာကွယ်ဆေးများလည်း လက်ခံရရှိထားကြောင်း တာဝန်ရှိသူထံမှ သိရသည်။
အထူးသဖြင့် Sinopharm ကာကွယ်ဆေးကို ကုမ္ပဏီများ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ၎င်းတို့၏ အလုပ်သမားများကို အခမဲ့ထိုးပေးရန်အတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ထောက်ပံ့ပေးသည့် အင်ဒိုနီးရှား ကုန်သွယ်ရေး နှင့် စက်မှုကုန်သည်ကြီးများအသင်းက စတင်ဆောင်ရွက်သော အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း နှင့် ဒေသအခေါ် “gotong royong” နှင့်အတူ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး အစီအစဉ်များအတွက် အသုံးပြုရန်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လူဦးရေ ၂၇၁ ဒသမ ၃၅ သန်းနီးပါးရှိသော အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ပြည်သူ ၁၈၁ ဒသမ ၅ သန်းအား ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံခြင်းဖြင့် လူအများကြား ကိုယ်ခံအားစနစ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
JAKARTA, May 25 (Xinhua) — Another batch of the COVID-19 vaccine in bulk produced by Chinese pharmaceutical company Sinovac arrived at Indonesia’s Soekarno Hatta Airport Tuesday morning,asenior Indonesian official said.
“Today we witnessed the arrival of 8 million bulk doses of the COVID-19 Sinovac vaccine,” said Coordinating Minister for the Economy Airlangga Hartarto, adding it means that Indonesia has so far receivedatotal of 83.9 million doses of COVID-19 vaccine, both in bulk and ready-to-use.
Specifically, the Sinopharm vaccine is used for vaccination programs withamutual cooperation scheme locally called “gotong royong” initiated by the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, where companies or institutions provide COVID-19 vaccines for their employees for free.
Indonesia, withapopulation of nearly 271.35 million people, is targeting the inoculation of 181.5 million people to create herd immunity. Enditem